Ny Nokia 1 dia mandray ny fanavaozana ny Android Pie | Androidsis
Ny Nokia 1 dia mandray ny fanavaozana ny Android Pie
Farany, Navoakan'ny HMD Global ny fanavaozana an'i Android Pie ho an'ny Nokia 1, ny finday avo lenta izay lasa ofisialy tamin'ny Mobile World Congress 2018 tany Barcelona, ​​Espana, tamin'ny faran'ny volana feb. Ilay fitaovana, tamin'ny voalohany, dia nampiasa ny fanontana Go an'ny Android 8.1 Oreo.
Tanteraka ny fampanantenan'ny orinasa. Miaraka amin'ny fiparitahan'ity kinova firmware vaovao ity ho an'ny farany ambany, izay nanomboka androany, ny HMD dia tsy ratsy taorian'ny nanambarany fa handray azy ireo maodely rehetra.
Tamin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy Twitter no nanambarana fa efa tonga ny Android Pie ho an'ny Nokia 1. Juho Sarvikas, talen'ny vokatra ao amin'ny Nokia, no olona nanambara ity vaovao ity tamin'ny alàlan'ny sioka iray, izay ilay aseho etsy ambany.
Faly mizara fa ny finday avo lenta mora vidy indrindra, Nokia 1, dia manavao ny Android 9 Pie manomboka anio. Ankehitriny dia misy smartphone Nokia ho an'ny rehetra mihazakazaka Pie - mitondra anao ny zavatra niainana farany avy amin'ny Google. Ireo finday Nokia dia mihatsara hatrany #getsmart #nokiamobile pic.twitter.com/BYONKx6q5n
- Juho Sarvikas (@sarvikas) Jona 25, 2019
Raha tompona Nokia 1 ianao dia mety mbola tsy nahazo jiro maitso hisintona sy hametraka ireo fonosana firmware vaovao. Tadidio fa ny ankamaroan'ny fanavaozana dia zaraina miandalana, na amin'ny maodelin'ny smartphone, na faritra na faritra, na antony hafa. Na izany aza, azo antoka fa hahatratra ny Nokia 1 rehetra.
Alohan'ny hanombohana ny fizotry ny fisintomana, Manoro hevitra izahay ny hampifandray ilay fitaovana amin'ny tamba-jotra Wi-Fi miorina, mba hialana amin'ny fanjifana angon-drakitra be loatra sy izay mety tsy fahombiazana mety hitranga mandritra ny fizotrany, na noho ny fihenan'ny fifandraisana na ny fahasahiranana hafa mety hitranga.
Nokia 1 Plus: Naseho ny endri-javatra, ny famaritana ary ny famindrana
Famerenana kely ny toetra sy ny famaritana ara-teknika an'io vidiny ambany dia ambany-, Tsara homarihina fa manana efijery diagonal 4.5-inch izy, processeur Mediatek MT6737 quad-core, RAM 1 GB ary habaka fitehirizana anatiny 8 GB azo esorina amin'ny carte microSD. Ho setrin'izany, ny terminal dia manome fakan-tsary 5 MP ao aoriana ary fakan-tsary an-tsary 2 MP ho an'ny selfie sy maro hafa, ary koa bateria 2,150 mAh.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Nokia 1 dia mandray ny fanavaozana ny Android Pie
Niharihary ny sarin'ny boaty fivarotana Xiaomi Mi CC9
Tafavoaka velona amin'ilay tetezana amin'ity lalao mahazatra ity antsoina hoe Survive The Bridge